Dad badan oo Coronavirus ugu geeriyooday Magaalada Burco | Dhacdo
Home Wararka Maanta Dad badan oo Coronavirus ugu geeriyooday Magaalada Burco
Dad badan oo Coronavirus ugu geeriyooday Magaalada Burco
Agaasimaha Guud ee Isbitaalka Burco, Cabdi Suudi Ibraahim ayaa maanta sheegay in xanuunka uu si weyn ugu soo laba kacleeyay Magaalada Burco, kororkiisana laga dareemay magaaladaasi.
Agaasimaha ayaa sheegay in maalmihii ugu dambeysay xanuunka laga baaray 668 qof, lagana helay 224 qof, kuwaa oo dhammaantood reer Burco ah.
“Runtii dadkaasi waxay noqonayaan marka boqoleey laga dhigo boqolkiiba shan iyo soddon qof (35%). In boqolkii qofba ee la baaray laga helay xanuunka shan iyo soddon qof oo ka mid ah.” Ayuu yiri Agaasimaha.
Agaasimaha oo Warbaahinta kula hadlay Isbitaalka Burco ayaa sheegay in 19-kii maalmood ee ugu dambeysay ay xanuunka 10 qof ugu geeriyoodeen Xarunta Magaalada Burco ee dadka xanuunkaasi looga daweeyo. Tiradan ayuu ku sheegay inay tahay tirada laga warqabo ee xaruntaasi xanuunka ugu geeriyootay.
Cabdi Suudi Ibraahim, Agaasimaha Guud ee Isbitaalka Burco ayaa sheegay in khatarta xanuunka iyo faafitaankiisaba ay muuqato, iyadoona uu bulshada ugu baaqay in cid weliba ay taxadarto, isla-markaana ay dadku qaataan maaska afka iyo sanka lagu daboosho, kuna dadaalaan gacmo dhaqista.
Saamaynta soo laba kacleynta xanuunsidaha COVID-19 ee fayriska Corona uu keeno ayaa laga dareemay inta badan deegaanada Soomaalida.
Previous articleGalaangalka Beesha Caalamka iyo go’aanada Madaxwayne Farmaajo
Next articleJubbaland oo weerar afka ah ku qaaday Madaxweyne Farmaajo